ओप्पो A7X ले प्राविधिक विशिष्टता र रेन्डरहरू लीक गर्‍यो Androidsis
ओप्पोले हामीलाई नयाँ उपकरणमा परिचय गराउन लागेको छ, जुन "वाटरड्रोप" नचको साथ र आठ कोर मेडिएटेक प्रोसेसरको साथ आउँनेछ। यसका साथै बिभिन्न सुविधाहरू पनि छन् जुन यसलाई मध्य-दायराको रूपमा लिने छ जब खातामा लिन्छ जब यसले बजारमा यसको फोर गर्दछ। हामी ओप्पो A7X को बारेमा कुरा गर्छौं.
हालै, यस टर्मिनलको बिभिन्न आधिकारिक रेन्डरहरू र गुणहरू प्रकट भएको थियो, साथै यसको सुरूवात मिति, जुन यस महिनाको बीचमा निर्धारित गरिएको छ। एशियाई फर्मले हाम्रो लागि के तयारी गरेको छ पत्ता लगाउनुहोस्।
ओप्पो ए X एक्स, आधिकारिक रेन्डर अनुसार चिनियाँ स्रोतले प्रकाशमा ल्यायो, यो एकदम सँग मिल्दो डिजाइनको साथ आउनेछ Oppo F9, जसमा हामी सानालाई हाइलाइट गर्दछौं निशान त्यो छ डाटाले सुझाव दिन्छ कि यसले उही स्क्रिन साइज र क्वालिटी पनि साझा गर्दछ, जसको लागि यसको विकर्ण .6.3..2.340 इन्च छ र यो २H1.080० x १००p (१ .19.5 ..9:)) को फुलएचडी + रिजोलुसनको साथ आउँदछ।
स्मार्टफोनले GB जीबी र्याम र १२4 जीबी आन्तरिक भण्डारण स्पेस समावेश गर्दछ, जबकि मिडियाटेकको हेलियो P60 चिपसेटले यसलाई शक्ति दिन्छ। माथि उल्लिखित F9 जस्तै, यसको पछाडि १ cameras र २ MP कन्फिगरेसनमा दुई क्यामेरा छन्। जे होस्, यसको फ्रन्ट सेन्सर विपरीत, जुन २MP एमपी हो, A16X ले १MP एमपी फ्रन्ट स्निपरको प्रयोग गर्दछ।
अन्य प्रमुख गुणहरूको बारेमा, el मध्य दायरा Android .8.1.१ Oreo लाई कारखाना अपरेटिंग सिस्टमको रूपमा चलाउँदछ। यसका अतिरिक्त यसका आयामहरू १156.7..74 x x 7.99 x 169..4.230 मिलिमिटर छन् र यसको वजन १ 3.5 grams ग्राम छ, जबकि यसको ब्याट्रीको क्षमता ,,२XNUMX० एमएएच छ। यसको पछाडि फिंगरप्रिन्ट रिडर पनि छ र अनुहारको पहिचान पनि छ। एकै समयमा, एक माइक्रोयूएसबी पोर्ट at. mm मिमी जैक अडियो कनेक्टरको साथ तल अवस्थित छ।
अन्तमा, स्रोत अनुसार, OPPO A7X सेप्टेम्बर २० मा सुरूवात हुनेछ र २,०2.099। युआन (~ २265 युरो) मा बेच्ने छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » हाम्रो बारेमा » प्राविधिक विशिष्टता र ओप्पो A7X को लीक रेन्डर, फर्मको अर्को मध्य-दायरा
तपाईंको फोनको एनएफसीबाट अधिक प्राप्त गर्न युक्तिहरू